အားပါးပါး !!!!! အလန်းစားရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ တင်ပေးလိုက်တဲ့ မော်ဒယ် စတယ်လာ – Shwe Yoe
အားပါးပါး !!!!! အလန်းစားရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ တင်ပေးလိုက်တဲ့ မော်ဒယ် စတယ်လာ
သွယ်လျတဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ တက်သစ်စ ဆက်ဆီ မော်ဒယ်လ် စတာလာ ကိုသိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ဆွဲမက်ဖွယ်ရင်သပ်ရှုမောစရာ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ရင်ကို ဆွဲဆောင်ညို့ယူထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူ လှပကြည်လင်တဲ့ အသားအရေကိုပါ ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ဆက်ဆီကျတဲ့ သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံတွေနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင်သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအခါမှာတေှာ့ာ စတယ်လာ တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှုမှုရှိရှိနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ရေကူးကန်ထဲမှာ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေကို တင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်အလှကတော့ မြင်သူတိုင်း ငေးလောက်အောင်ကို ညို့ယူဖမ်းစားနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်း စတယ်လာ ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေးကို ကို ကြည့်ရှုနိုင်စေရန်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သှယျလတြဲ့ အမိုကျစားခန်ဓာကိုယျလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ တကျသဈစ ဆကျဆီ မျောဒယျလျ စတာလာ ကိုသိကွမယျ ထငျပါတယျ။ဆှဲမကျဖှယျရငျသပျရှုမောစရာ အမိုကျစားပုံရိပျလေးတှနေဲ့ ပုရိသတှရေဲ့ရငျကို ဆှဲဆောငျညို့ယူထားတဲ့ အလနျးစား မျောဒယျသရုပျဆောငျလေးဖွဈပါတယျ။သှယျလြ ပွပွေဈတဲ့ ခန်ဓာကိုယျနဲ့အတူ လှပကွညျလငျတဲ့ အသားအရကေိုပါ ပိုငျဆိုငျ ထားပွီး ဆကျဆီကတြဲ့ သူမရဲ့ အမိုကျစားပုံတှနေဲ့ ညို့အားပွငျးပွငျး ဆှဲဆောငျနိုငျသူလေးလညျးဖွဈပါတယျ။
ယခုအခါမှာတှောာ့ စတယျလာ တဈယောကျ ဆှဲဆောငျမှုမှုရှိရှိနဲ့ ဆကျဆီကကြ ရကေူးကနျထဲမှာ ရိုကျထားတဲ့ ပုံတှကေို တငျပေးလာတာပဲဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့ အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျအလှကတော့ မွငျသူတိုငျး ငေးလောကျအောငျကို ညို့ယူဖမျးစားနတောအမှနျပဲဖွဈပါတယျ။ခဈြပရိသတျကွီးလညျး စတယျလာ ရဲ့ အမိုကျစား ဗီဒီယိုလေးကို ကို ကွညျ့ရှုနိုငျစရေနျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
သရုပ်ဆောင်နေတိုးနဲ့ တူတယ်ဆိုပြီး ပြည်သူတွေ သွားရောက်ကြည့်ရူမူကြောင့် လိုင်းပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ကုဝေရနတ်မင်းကြီး…
အခါခါပြန်ကြည့်ချင်လောက်အောင် မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ နွယ်ဒါလီထွန်း
ဆက်ဆီ ကျလွန်းတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ရေကူးကန်ထက်က အမိုက်စား ပုံလေးတွေ တင်ပေးလာတဲ့ အယ်လာ